Telefishanka beIN Sports Oo Shaaciyey Wariyaha Tabin Doona Kulanka Caawa Ee Finalka Champions League - Gool24.Net
Telefishanka beIN Sports Oo Shaaciyey Wariyaha Tabin Doona Kulanka Caawa Ee Finalka Champions League
Telefishanka beIN Sports ayaa ku dhawaaqay wariyaha luuqadda Carabiga ku tabin doona kulanka caawa ee finalka tartanka Champions League ee ay isku haleeli doonaan Paris Saint-Germain iyo Bayern Munich.
Tartanka Champions League oo mar ku dhowaaday in gebi ahaantiiba la kansalo ayaa taariikhda markii ugu horreysay finalkiisa la ciyaarayaa bisha August oo gabogabo ah, iyadoo hore loo dhamaystiri jiray dhamaadka bisha May ama horraanta June, laakiin Fayraska Korona oo ay ciyaaruhu u xidhnaayeen muddo afar bilood ka ka badan ayaa sababay in finalkani afar bilood dib uga dhaco waqtigiisii.
PSG ayaa markii ugu horreysay timid finalka, waxaanay waajahaysaa Bayern Munich oo shan mar oo hore kusoo guuleysatay, isla markaana soo wada badisay dhamaan kulamadeedii tartankan ee xili ciyaareedka, soona dhalisay 42 gool.
Dunida oo dhan ayaa sugaysa daawashada kulankan oo aan loo ogolayn in wax taageereyaal ah ay garoonka galaan, waxaana laga wada fiirsan doonaa telefishannada oo luuqado kala duwan ku baahin doona.
Telifshanka beIN Sports oo dhawr luuqadood ku tabiya ciyaaraha ayaa shaaciyey wariyaha qaban doona kulankan ee codkiisa luuqadda Carabiga ay daawadeyaashu ku raaxaysan doonaan.
Kulamadii siddeedda iyo semi-finalka waxa doorweyn kasoo qaatay labada wariye ee aadka loo jecel yahay codkooda ee Rauf Khalif iyo Cusaam Shuwali, laakiin caawa labadooda midkoodna ma joogo waxaana ciyaartan lagu qoray Xafiid Daraji oo ah khabiir waqti hore sii diyaarsaday xogta uu uga baahan yahay ciyaartoyda labada kooxood, taariikhda kulanka iyo wax kasta oo muhiim ay tahay inuu daawadeyaasha u sheego.
Haddii sida qorshuhu yahay ay wax walba ku socdaan oo uu caafimaad qabo, waxa kulankan caawa baahintiisa ku qoran Xafiid Daraji.